Lisa Schulte Moore. Xuquuqda sawirka: John D. iyo Catherine T. MacArthur Foundation
Astaamaha Tenzin Dolkar
Beeruhu waa qayb weyn oo ka mid ah dhaqanka, nolosha, iyo nolosha bulshooyinka miyiga ah ee ku nool Midwest. Qayb ahaan, waxay sidoo kale xisaabinaysaa 10% wadarta guud ee gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee Maraykanka, iyo xitaa in ka badan gobolada sida Minnesota iyo Iowa, halkaas oo 25% iyo 30% ee qiiqa ay ka yimaadaan beeraha.
Door intee le'eg ayay beeruhu ka ciyaari karaan xallinta xiisadda cimilada, maxayse yihiin kuwa ugu rajada wanaagsan xalalka cimilada ee salka ku haya ciidda?
Taasi waxay ahayd mawduuca Dr. Lisa Schulte Moore ee wada sheekeysiga Tenzin Dolkar mar dhow Westminster Town Hall Forum. 10kii sano ee la soo dhaafay, Schulte Moore waxa ay horumarisay oo ay faafisay stripe dhaqanka ilaalinta ee guud ahaan 14 gobol iyo in ka badan 14,000 acres, oo la isku daro xaddi yar oo baruur ah meelo istiraatiiji ah oo ku dhex jira galleyda iyo beeraha soybean si loo ilaaliyo ciidda iyo biyaha iyada oo la siinayo deegaan loogu talagalay duurjoogta.
Qodobbada ugu muhiimsan ee ka soo baxay Madasha Westminster ayaa lagu daray hoos. Wareysiga waa la habeeyey si dheer oo hufan. Waxaad sidoo kale daawan kartaa duubista dhacdada oo buuxda.
Tenzin Dolkar, McKnight Foundation (bidix) iyo Lisa Schulte Moore, Jaamacadda Gobolka Iowa (midig) ee Madasha Hoolka Magaalada Westminster. Xuquuqda sawirka: Tom Northenscold
QAABKA MUHIIMKA AH
Reer miyigu waa dad iyo dhul. Intii aan ku jiray Jaamacadda Gobolka Iowa, waxaan ku noolaa, neefsaday, oo wax ka baranayay beeraha-oo waxaa igu soo biiray dadkeeda, fadligeeda, iyo caqabadaha haysta. Waxa aan ka maqlo beeralayda iyo dadka reer miyiga ah ee shaqadan ku jira, in socdaalkoodu uu ku bilaabmayo kuna dhamaado dad iyo dhul. Dhulka beeralayda ayaa hoy u ah. Waxay wadaagaan sheekooyinka beerahooda, dhaxalkooda, bulshooyinka ay ka tirsan yihiin, dalagyada iyo biyaha, wareegga sannadlaha ah ee beeraha, iyo hadda oo sidoo kale ku saabsan beeralayda.
Carrada caafimaadka qabta ayaa fure u ah cunto caafimaad leh iyo deegaan caafimaad leh. Maxaad u danaynaysaa beeralayda iyo ciidda? Sababtoo ah dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan wax cunno, runtii waa wax fudud. Sida beeralayda, qoraaga, iyo dhaqdhaqaaqayaasha Wendell Berry, cunnidu waa fal beeralay ah. Haddana qaar badan oo inaga mid ah oo ku nool Maraykanka iyo wadamada kale ee horumaray, beeralayda badan ayaa meel walba ka buuxa taas oo ay fududahay in aan iloobo in cuntadu aanay si fudud uga iman dukaanka cuntada. Taasi waxay keentay in aynu inta badan u qaadano cimilo, xaqiiqda ah in aynu halkan ka helno roob ku filan ciidda biyaha nafaqada xoolaha iyo dadka looga baahan yahay inay na siiyaan nolol maalmeedkeena. Dhammaanteen waxaynu ka mid nahay wareegga nolosha ee maanta lagu nafaqeeyo beeraha.
Ilaalinta carrada caafimaadka waxay la macno tahay in la daboolo. Carrada caafimaadka qabta kaliya ma bixiso cunto, waxay faa'iido u leedahay dhammaan deegaankeena. Ciidda caafimaadka qabta waxay naga caawisaa in aan la qabsano isbeddelka cimiladu iyadoo naga dhigaysa mid aad u adkeysaneysa abaarta iyo in aan u dhaqanno sidii isbuunyo oo kale xilliyada roobabka xooggan ay da'ayaan, biyaha meel ku ceshada oo yareeya fatahaadaha webiga hoose. Beeralayda intooda badani waxay horeba uga shaqeystaan hal ama in ka badan oo ah caadooyinka caafimaadka ciidda gudaha beerahooda, sida dhimista tacabka beeraha, hubaynta ciidda haraaga dalagga, ilaalinta nolosha joogtada ah, kala duwanaanshaha beerista, iyo isku dhafka xoolaha. Dhaqannadan, ilaalinta daboolka nolosha ee joogtada ah waa meesha aan diiradda saaro xirfadayda.
Waxaan u baahanahay inaan ka dhigno beeralayda dib-u-soo-nooleynta. Xudunta u ah beeralayda dib-u-soo-nooleynta ayaa ah fikradda ah in ciidda la sii jiri karo oo dib loo soo noolayn karo iyada oo lagu jiro hawl-beereed wax soo saar leh oo faa'iido leh. In kasta oo fikraddu aanay ahayn mid cusub, haddana dhex-dhexaadintu waa. Waxaad hadda ka heli kartaa macluumaadka ku saabsan dib-u-soo-nooleynta beeraha buugaagta si weyn loo heli karo sida David Montgomery's Kobcinta Kacaanka: Soo Celinta Carradeenna Nolosha, ama uu qoray Brian DeVore oo u dhashay Minnesota, buug la yiraahdo Beerista Najaxa Duurjoogta ah, ama Raadiyaha Dadweynaha Minnesota Podcast Work Field, iyo xitaa filimka Hollywood-ka ah oo dhererkiisu dhan yahay, Dhunkaday Dhulka. Beeraha nooc walba leh waxay ka hadlaan sida dadaalkooda ah inay dib u soo nooleeyaan ay beerashada uga dhigeen mid xiiso leh mar kale, iyaga oo ogaanaya sida loo dheelitiro wax soo saarka muddada gaaban iyo caafimaadka ciidda muddada dheer.
Beeraleydu waxay u baahan yihiin taageero aad u badan. Waxaan u baahanahay bulshooyin beeraley ah oo taageera si beeralaydu ay wax uga bartaan kuwa kale iyaga oo kale ah maalmaha beerta, siminaarada, webinarada, iyo warbaahinta bulshada, iyo sidoo kale iyada oo loo marayo ururada sida Beeralayda Dhaqanka ee Iowa, Mashruuca Land Stewardship, Jaamacadda Minnesota, iyo Kordhinta Gobolka Iowa. Waxaan sidoo kale u baahanahay bulsho taageerta cuntayaasha oo u hadla hababka cuntada ee adkeysiga leh. Ku dadaal in aad noloshaada mashquulka ah ku jirto hal mar kaliya maaha ee saddex jeer maalintii si aad uga fikirto waxaad cunayso wakhtiyada cuntada: halka ay ka timid iyo cidda soo saartay.
Dr. Lisa Schulte Moore iyo Tenzin Dolkar oo la hadlaya hogaamiyayaasha beeraha soo dhawaynta Westminster. Xuquuqda sawirka: Tane Danger
Tusaalooyinka xariijimaha prairie ee loo tolay dhul-beereedka Iowa. Dhibcaha sawirka: Omar de Kok-Mercado, Jaamacadda Gobolka Iowa
Dolkar: 30% ee gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo ee Iowa waxay ka yimaadeen waaxda beeraha. Sideed u cabbirtaa dhaqamada hal-abuurka leh sida prairie strips iyo kuwa kale ee aad ka shaqaynayso si aad u yarayso qiiqa sii daaya?
Lisa: Waxay ku bilaabataa wadahadal lala yeesho beeralayda. Dunideena kala jabtay, kala furfuran maanta waa inaan diirada saarno wadahadalada adag ee ku saabsan beeraha iyo isbedelka cimilada qodobada aan ku heshiino. Waxaan bartay in aan ku bilaabo hadalka ku saabsan ciidda-caafimaad, carrada bacrin ah-iyo siyaabaha loo qiimeeyo, hababka loo ilaaliyo, hababka dib u soo celinta. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waa wax aan ku heshiinay waa muhiim. Sidan ayaanu u samayn karnaa tilmaanta faraha yar waxaanan abuuri karnaa curaarta la wadaago, horumarinta fahamka iyo dareenka. Halkaa waxa aan ka bilaabi karnaa in aan ka wada shaqayno waxyaabo yaryar, aragno qaar guulo gaadhay, oo aan dhisno rikoodhka iyo kalsoonida loo baahan yahay in laga shaqeeyo waxyaabo badan oo ka sii weyn. Oo waxaa jira waxyaabo waaweyn oo qurux badan oo aan u baahanahay inaan ka shaqeyno.
Marka aynu eegno kor u qaadista, waxaa jira qaybo yar oo ka mid ah. Waxaan ognahay in dhammaan isbeddelka dabeecadda uu ka bilaabo wacyiga ka dibna waxaan u baahanahay inaan u gudubno isbeddel ku yimaada dabeecadaha si aan u beddelno caqiidada iyo beddelka dabeecadaha. Waxaa jira faragelino badan oo kala duwan oo u baahan inay dhacaan iyadoo lagu salaynayo halka uu qof ku sugan yahay noocaas.
Xariijimaha beeralayda, waxaanu si firfircoon ula shaqaynaynaa beeralayda si aan u dhexgalno daboolka beeralayda u dhashay beerahooda oo ay ku dhex jiraan galleyda iyo digirta. Wadahadalku wuxuu markii hore ku bilaabmay wacyi-gelin, aniga iyo kooxdaydaba waxaan nasiib u yeelanay in ay taageeraan machadyo badan, oo ay ku jiraan McKnight Foundation, si aan cilmi-baaris ugu samayno xargaha barafka, taas oo muujinaysa saamaynta xitaa xaddi yar oo baraf ah ay ku bixin karto marka si caqli-gal ah loo isku daro. galay beer dalagga.
Markii aan bilownay wadaagista qaar ka mid ah natiijooyinkaas-sida ku haysashada 95% in ka badan ciiddaada berrinka iyada oo ka soo horjeeda in ay sii socoto, ilaalinta 77% in ka badan fosfooraska aad ku bixisay beerta, 70% ee nitrogen, labanlaabaya kala duwanaanshaha noolaha shimbiraha. , oo saddex jibaarmay beeralayda - beeralayda ayaa u soo baxay inay sheegaan inay jecel yihiin fikradda iyo inay ku xidhan tahay qiyamkooda. Waxay nala bilaabeen inay nagala shaqeeyaan sidii ay isku xidhi lahaayeen xariijimaha prairie ee beerahooda.
Waxay ahayd hab lagu qaato fikrad cilmiyaysan oo loo raro beer shaqaleed halkaas oo qof uu noloshiisa ka samaysanayo. Waxaan ka shaqeynay xoogaa kor u kac iyo hoos u dhac ah oo aan sameynay, beeralaydana way jeclaysteen. Waxay ka heleen wixii ay arkayeen iyo saamaynta ay ku leeyihiin beerahooda, waxayna bilaabeen inay ka hadlaan.
Isku soo wada duuboo xogta aan uruurinay iyo beeralayda oo ka hadlay hab dhaqanka ayaa si togan u soo kordhisay kalsooni dhab ah oo dad badan indhaha u furtay. Taas la'aanteed, qaar badan oo iyaga ka mid ah weligood diyaar uma ay noqdeen in ay ka fikiraan dhex galka beeralayda beerahooda dalagga. Martigelinta maalmaha beerta si beeralaydu u tusaan sida ay u shaqaynaysay way weynayd, sidoo kale. Saddexdaas shay ee la isku daray ayaa loo oggolaaday isbeddellada siyaasadda qaarkood, sida isbeddelka ku yimid Billaha Beeraha USDA ee 2018 kaas oo liis gareeyay xargaha prairie markii ugu horreysay dhaqan u qalma Barnaamijka Kaydka Ilaalinta. Tani waxay la jaanqaadday fikradda kaliya maahan qiyamka beeralayda, laakiin sidoo kale buugaagta jeebka, taasina waxay runtii ahayd qayb muhiim ah oo isbeddelka dabeecadda ah.
Dunideena kala jabtay, kala furfuran maanta waa inaan diirada saarno wadahadalada adag ee ku saabsan beeraha iyo isbedelka cimilada qodobada aan ku heshiino. Waxaan bartay in aan ku bilaabo hadalka ku saabsan ciidda-caafimaad, carrada bacrin ah-iyo siyaabaha loo qiimeeyo, hababka loo ilaaliyo, hababka dib u soo celinta. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waa wax aan ku heshiinay waa muhiim. DR. LISA SCHULTE MOORE, JAAMACADDA GOBOLKA IOWA.
Dolkar: Maxaan ugu baahanahay si aan ugu saxno sharciga Beeraha ee soo socda si aan u taageerno dhaqamada cusub ee runtii bedeli kara beerashada Midwest iyo Minnesota?
Lisa: Saynisyahan ahaan, doorkaydu waa inaan bixiyo xog wanaagsan oo aan geliyaa gacmaha dadka u doodi kara oo go'aanno wanaagsan qaadan kara. Runtii waxaan rabaa inaan carabka ku adkeeyo in hadda ay tahay waqti muhiim ah oo tan la saxo. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan sameyn karno si aan u hagaajino suunka galleyda, laakiin tallaabada kaliya ee ugu fiican ayaa ah in la ogaado sida loo caawiyo beeralayda in ay sii wataan daboolka nolosha ee dhulka sanadka oo dhan. Waxaan u baahanahay dhirta nool ee ciiddayada sanadka oo dhan.
Doolarka: Dhowrkii sano ee u dambeeyay Minnesota waxaan ku soo aragnay roobab aad u daran iyo abaaro daran. Sideed u dhistaa nidaam beeralay oo u adkaysan kara cimilada? Waa maxay fursadaha aad u aragto beeralayda, iyo taageero noocee ah ayay u baahan yihiin?
Lisa: Waxaan runtii u maleynayaa in caafimaadka carradu uu yahay furaha marka aan ka hadlayno dhisidda nidaamyada beeraha u adkeysanaya cimilada. Caafimadka carradu waxa ay muhiim u tahay dabaylaha cimilada iyo abaarta iyo in la soo saaro cunto nafaqo leh. Waxa ay dani ugu jirtaa beeralayda in ay ciidooda caafimaad qabaan, mana aha oo kaliya in ay wax soo saar helaan, balse sidoo kale waa in ay u gudbaan jiilka soo socda ee qoyska ama in la qiimeeyo tayada ciidda ka hor wax kala iibsiga.
Doolar: Ma ka hadli kartaa doorka bacriminta ganacsigu ku leeyahay caafimaadka ciidda iyo saamaynta deegaanka iyo nolosha dadka?
Lisa: Ammonia synthetic waxaa lagu sameeyaa habka haber bosch ee ka yimaada shidaalka fosil. Marka aan ka fekereyno saameynta cimilada ee beeraha, bacriminta nitrogen waa maroodiga qolka. Waxaan runtii u baahanahay inaan ogaano sida loo yareeynayo wax-soo-saarka nitrous oxide ee ka yimaada dhul-beereedka anagoo sidoo kale soo saarna dalagyo la iibin karo. Ma hayno qalabkii sayniska iyo maamulka ee aan taas ku samayn lahayn si sax ah. Waxaan jeclaan lahaa in aan aad uga horrayno cilmigeenna marka loo eego inta aan nahay.
Taasi waxay tidhi, wax badan baannu ognahay, mid ka mid ah waxyaabaha aan samayn karno waa beddelka bacriminta ganacsiga synthetic ee lagu soo saaro shidaal fosil ah oo leh ammonia cagaaran oo lagu soo saaro habka korantada ee ku shaqeeya tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waxaan sidoo kale ogaan karnaa sida loo maareeyo dhul-beereedka si uusan u dillaacin iyadoo la gelinayo bacriminta nitrogen ee dalagga xilli ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan. Waxaa jirta fursado badan oo hal abuurnimo halkaas.
Waxaan u baahanahay inaan xoogaa wada hadal adag ka yeelano meelaha ay tahay inaysan noqon wax soo saarka. Qaarkood waa meelo qoyan oo hooseeya oo u muuqda inay noqdaan baro kulul qiiqa nitrous oxide. Hal shay oo aan sameyn karno ayaa ah in aan ku dhejino meel yar oo barxad ah halkaas. Taasi waa sheekada aan la yeelanayo beeralayda.
Dooxa Prairie iyo soybeans oo ku yaal beer gaar ah oo ku taal Degmada Grundy, Iowa. Xuquuqda sawirka: Omar de Kok-Mercado, Jaamacadda Gobolka Iowa
Doolkar: Hogaamiye Midwest ahaan, marka la eego jawiga isbeddelka cimilada, waa maxay aragtidaada ku saabsan beerashada Maraykanka 2030 iyo 2050?
Lisa: Waxaan maanta halkan kula hadlayaa, laakiin waxa aan runtii jeclahay in aan sameeyo waa uun dhegaysi. Waxaan jeclahay inaan aado maalmaha garoonka. Waxaan jeclahay inaan aado beeraha oo aan dhegeysto waxa ay dadku ka hadlayaan, weydii aragtidooda. Waxaanu samaynay mashruucyo cilmi baadhiseed halkaas oo aanu ku muujinayno sawiro oo aanu nidhaahno, "Noo sheeg waxa aanu halkan ku helnay oo noo sheeg waxa aanu khaladnay," iyo "Sidee ayaad muuqaalkan uga dhigi lahayd mid u ekaan lahayd aragtidaada?"
Geedi socodkaas waxaan arkay in wax badan la isku raacsan yahay marka la eego yoolka guud. Laga soo bilaabo dhammaan noocyada kala duwan ee beeralayda ilaa dadka deggan magaalooyinka, dhammaanteen waxaan rabnaa in beeralaydu noqoto mid wax soo saar leh oo ay saameyn yar ku yeelato deegaanka. Dadka ku nool magaalooyinka ayaa aad u danaynaya biyaha iyo cimilada, beeralayda ayaa ka sheekeeya sida ay ugu baahan yihiin suuqyo cusub oo u sahlaya inay si fiican u ilaashadaan biyaha, yareeyaan waxtarla’aanta beertooda (waa sida ay hadalka u dhigeene, halkii ay odhan lahaayeen gaaska aqalka dhirta lagu koriyo). dhimis).
Shaqadayda waxaan isku dayaa in aan isku xiro fikradahan kala duwan si aan u ogaado meesha aan ku heshiin karno oo aan bilaabi karno wada shaqeyn. Tusaale ahaan, sidee baannu u balaadhin karnaa xariijimaha prairie laga bilaabo 10% ee muuqaalka ilaa 25% ee muuqaalka? Waan ognahay inay jiraan siyaabo aan taas ku samayn karno, laakiin sidoo kale waxaa jira caqabado. Ma jiraan dad aad u tiro badan oo beeralay ah oo haysta caasimad ay ku sameeyaan wax-soo-saarka xoolaha ku salaysan cawska, taas oo runtii ah qayb muhiim ah oo ka mid ah halxiraalaha. Waxaan sidoo kale u baahannahay inaan awoodno inaan abuurno ilo tamar oo ku saleysan daboolka geedaha dhaladka ah ee sanadlaha ah si ay beeraleydu u helaan suuq kale oo ay ka heli karaan dhirtooda. Runtii aad ayaan u rajo weynahay, sababtoo ah waxaan la shaqeyneynaa kooxaha sida Beeralayda Dhaqan ee Iowa kuwaas oo qaadanaya tamar kale si ay uga dhigaan aragtiyadaas mid dhab ah.
Ma jiraan wax ka badan oo aan u baahanahay inaan samayno? Ma laga yaabaa in siyaasadda wax laga beddelo? Kaabayaasha dhaqaalaha wax ma beddeli karaan? Haa Markaa waxa ugu dambeeya ee aan ku waydiinayo waa inaad sii wadato wada hadalkan. Waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad la xiriirto kooxaha bulshada deegaankaaga ee la shaqeeya beeralayda kuwaas oo sidoo kale isku dayaya inay ka gudbaan kala qaybsanaanta reer miyiga iyo magaalooyinka, oo si wanaagsan u taageeraan beeralayda iyo u doodista siyaasado wanaagsan oo macno ku leh meeshaas.
Ku saabsan Dr. Lisa Schulte Moore: Schulte Moore waa a MacArthur Genius Fellow iyo agaasimaha Muuqaalka Deegaanka iyo Shaybaarka Maareynta Nidaamka Deegaanka ee Joogta ah ee Jaamacadda Gobolka Iowa. Iyadu waa aasaasaha Sayniska ku salaysan Tijaabooyinka Rowcrops Integrated with Prairie Strips (STRIPS), kaas oo horumariyay dhaqanka ilaalinta strips prairie. Iyadu waxay sidoo kale hormuud u tahay horumarinta Dadka ku jira Is-dhexgalka Deegaanka/Watershed Watershed (PEWI), oo ah ciyaar waxbarasho oo fudud oo shabakad ku salaysan oo loogu talagalay inay dadka ka caawiso inay fahmaan saamaynta bini'aadamka ee deegaanka iyo horumarinta maamulka khayraadka dabiiciga ah. Waxay maamushaa C-Change, oo ah Waaxda Beeraha Mareykanka ee Machadka Qaranka ee Cunnada iyo Beeraha Mashruuca Nidaamyada Beeraha Joogta ah.
Ku saabsan Tenzin Dolkar: Dolkar waa sarkaalka barnaamijka ee McKnight Foundation's Barnaamijka Cimilada iyo Tamarta Midwest. Istaraatiijiyada dhulalka shaqada ee McKnight waxay xarun u tahay beeralayda inay yihiin hogaamiyayaasha xalalka cimilada waxayna ujeedadeedu tahay inay iska kaashadaan abuuritaanka xalalka ilaalinaya weelasha kaarboonka ee dabiiciga ah, jarista qiiqa, iyo kaarboonka kala wareegta dhulalka shaqada iyadoo la dhisayo nidaamyada u adkaysta cimilada iyo cadaalada. Kahor inta uusan ku biirin McKnight, Dolkar waxa uu ahaa lataliyaha cimilada ee Magaalada Minneapolis, lataliyaha siyaasadda beeraha ee Gudoomiyihii hore ee Mark Dayton, iyo Agaasimaha Tareenada ee Gobolka Minnesota.